PE Air Ventilation Pipe Extrusion Line dia mandeha tsara ao amin'ny orinasa SHANGHAI JWELL MACHINERY - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
PE Air Ventilation Pipe Extrusion Line dia mihazakazaka am-pahombiazana ao amin'ny orinasa SHANGHAI JWELL MACHINERY
Fotoana: 2018-09-12 Hits:
Tamin'ny taonjato faha-21, miaraka amin'ny fikatsahan'ny olona fiainana tsara, mamorona tontolo iainana mahasalama sy azo iainana, dia miha malaza hatrany ny rafi-panafody rivotra. Ny fantson-drivotra rivotra no singa manan-danja indrindra amin'ny fantson-drivotra.
Tato ho ato, ny JWELL Machining's Air Ventilation Pipe Extrusion Line izay novokarina ho an'ny orinasa alemanina, dia niasa tamina fahombiazana tao amin'ny orinasa SHANGHAI JWELL MACHINERY. Ny lalana mihazakazaka dia tena nahomby, nahasarika mpanjifa anatiny sy vahiny maro hitsidika ny fihazakazahana. Ny fiasan'ny tsipika famokarana dia tena malama, nahatonga ny vokatra fantsona tsara tarehy tonga amin'izao tontolo izao. Mampiavaka ny mpanjifanay, misafidy mavokely toy ny lokon'ny fantsona izy ireo. Loko mafana sy mahafinaritra, toy ny fikatsahan'ny olona fiainana tsara kokoa.
1) Volavolan-tsolika manokana manohitra fitaovana fantson-drivotra rivotra manokana.
2) Famolavolana lohan-doha avo lenta sy misy patanty manohitra ny fantson-drivotra rivotra.
3) JWELL dia manome ny firafitry ny fantson-drivotra Air Ventilation (Vahaolana lehibe ho an'ny mpanjifanay).
4) Amin'ny valizy valiny roa, mahazoa fanaraha-maso marina ny tsindry ho an'ny fantsona roa sosona.
5) Ny lalàm-by misy ny milina fanamafisam-peo, miantoka ny hetsika marina miaraka amin'ny fandeferana latsaky ny 0.02mm, ary mampihena ny fatiantoka ara-materialy mandritra ny fanombohan'ny tsipika.
6) Rafitra mora mifamadika amin'ireo sakana eo ambanin'ny endrika famolavolana.
7) Famolavolana maodely ho an'ny fitaovana amin'ny tsipika, ny rafitra mekanika an'ny extruders dia afaka miantoka ny fametrahana an-toerana ho an'ny mpanjifa.
8) Fehezin'ny solosaina, tsy mila miambina mpiasa, avo lenta ny automatisation.
Ny làlambe mihazakazaka ao amin'ny orinasa dia mandeha hatrany, hafainganam-pandeha misy rano mangatsiaka, haingana hatramin'ny 4m / min. Ity haingam-pandeha ity dia hafainganam-pandeha roa na telo heny raha oharina amin'ny tsipika fantsom-pifangaroana mahazatra eny an-tsena. Ary maharitra ny fihazakazahana, avo ny tahan'ny vokatra vita rehefa manomboka mihazakazaka ny fitaovana.
Fantson'ny paipa & fampiharana
Fametrahana mora sy malefaka tsara. Drafitra misy endrika mitafo misy rindrina mihantona roa, ny rindrina anatiny dia tena malama, mora diovina, sintomina ambany, tsy misy feo ary mitahiry hafanana.
Iza no mety ho mpanjifa mety?
Ireo mpanjifa izay mampiasa fantsona PPR / PERT be dia be, ary koa milina fampitaovana rivotra. Ny indostrian'ny fanafanana sy ny rivotra, ny indostrian'ny Air Chilling dia hisy fivoarana lehibe mety.
HIVERINAAndramana soa aman-tsara ny tsipika fantsom-pifandraisana Super PPR Fiber Glass